China Hydraulic Lock Composer fekitori uye vagadziri | Gladline
Muenzaniso: MJ2500-14 / MJ2500-20
Hydraulic Lock Munyori anonyanya kushandiswa kuunganidza makuru mabhodhi. Basa rayo guru nderekugadzirisa diki-dhayamiti huni uye zvimwe huni musimboti zvinhu zvekugadzira akasiyana bhodhi zvinhu, uye wozoenda kuburikidza nemhando dzakasiyana dzegluing uye extrusion. Mushure mekudziya uye nekumwe kuita, yakasimba bhodhi yepakati inozogadzirwa, saka ine kukosha kukuru mukugadzirisa huni uye inovandudza zvakanyanya kugona kwebasa.
Hydraulic Lock Composer inoshandiswa kutsemura huni, kunova kunokamura zvidimbu zvidimbu zvehuni zvakagadzirwa kuva mahwendefa mahombe; haisi chete inovandudza mhando yemahwendefa, inovandudza mashandiro epanyama eepakutanga mahwendefa, asi zvakare inowedzera chiyero chekushandiswa kwemahwendefa; inoshandiswa mukubatanidza Kupararira kwemarudzi ese ehuni mumaindasitiri akadai sehuni, kugadzira fenicha, kuvaka, kuvaka ngarava, uye mota. Iyo midziyo inoumbwa nefuremu, yekudzora, main shaft, inoshanda sprocket, passive sprocket, cheni, danda, konkreti kongiri, anobatsira compression uye magetsi system, yemhepo wedunhu system, nezvimwe.
Iyo mota inofambisa iyo huru shaft kuburikidza neyekudzora. Main mugodhi iri vakapakata masere mativi sandara vhiri. Matanda mana akaiswa padanda. Pamatanda pane zvisungo zvisere, uye kiramba yega yega ine sikuruu. Basa rekunamatira rinopedziswa ne pneumatic (hydraulic) inokonzeresa, (mahwendefa ane mukobvu wepasi pe 30mm anoshandisa compression yekubatsira). Mushure mekukanya, zviteshi zvisere zvakaomeswa, uye izvo zvinhu zvinogona kuburitswa uye mashandiro ekuparadza anogona kudzokororwa. Magetsi anodzorwa mweya wedunhu system. Kunze kweiyo pneumatic (hydraulic) inokonzeresa uye iyo yekumanikidza humburumbira, ayo anoshandiswa nemaoko, mamwe ese anodzorwa ne bhatani mashandiro. Iyo clamping unit inodzoserwa, iyo rack rack inodzoserwa, iyo yekunamatira unit yakatenderedzwa kumberi, uye iyo rack rack inotumirwa kupedzisa gungano. Iyo bhodhi uye yekuburitsa bhodhi yakaiswa mabhasikoro kuti vaone otomatiki kutonga.
Muenzaniso MY2500-14 MY2500-20
Max. kureba kwekugadzirisa 2500mm 2500mm
Max. kugadzirisa upamhi 1250mm 1250mm
Processing ukobvu 10-90mm 10-90mm
Chikamu huwandu 14 pc 20 pc
Zvinosunga huwandu pachikamu 8 pc 8 pc
Hydraulic pfuti huwandu 1 pc 1 pc
Simba 5.1KW 5.1KW
Hydraulic kumanikidza 8Mpa 8Mpa
Kuisa Saizi 4500 * 3800 * 3650 mm 5000 * 5500 * 3650 mamirimita
Kurongedza Saizi 3800 * 2200 * 2200mm 5500 * 2200 * 2200mm
Kurema 4800kg 6000kg
Pashure: Vacuum Laminating Machine
Zvadaro: Guruva Muunganidzi
Hydraulic Block Munyori